Uyini Forex (FX) Ukuhweba? - Kuhle Forex EA sika | Isazi Advisors | FX Robots
IkhayaForex SchoolUyini Forex (FX) Ukuhweba?
Siye bonke kwaba ephathini idina lapho kukhulunywa nje Forex Ufika bekhungathekile ubukeka. Abantu abaningi abazi ukuthi yini forex noma ukuthi isebenza kanjani futhi ukwenza kakhulu ekuqaleni Forex Abadayisi.
Uma uthi Forex imayelana ngidayisa zezimali angaphandle, iningi labantu lingavumelana kazi has lutho oluphathelene ukushintshisana zezimali ngalesi idokodo exchange angaphandle esikhumulweni sezindiza noma amasheke (bheka isithombe ngezansi). Uma baqonde ukuthi yini eyenza lezi izimakethe ukusebenza, ungakwazi ukuchaza ngokwakho emcimbini ukudla kwakusihlwa, futhi okungcono, ungaba yimpumelelo abadayisi.
Forex (noma FX) Kuyinto emelela emakethe exchange angaphandle noma lwemali emakethe, lapho zezimali ezivela emazweni ahlukahlukene bayigugu futhi banikana. Umuntu noma isikhungo othenga omunye lwemali ayothengisa elinye ukuthengiselana kanyekanye. Lwemali ukuhweba njalo kwenzeka ngababili lapho omunye lwemali ethengisiwe enye futhi amelwe notation ezilandelayo: EUR / USD noma USD / JPY. Izinga lokushintshisana kunqunywa ukunikezela funa.
Kuyini Ngempela Ingabe adayiswa Ngo Forex?
Akusona isitokwe sephepha noma impahla yomzimba. Kuyimali enzima ebandayo. Ngokunembe kakhudlwana, izingcezu zedatha emelela imali ebonakalayo. Kodwa-ke, akuyona imali eyodwa oyithengayo noma oyithengisayo, kodwa kunalokho uthengisa ngemali yezwe elilodwa kwelinye. Lokhu kuhlangana okuhlukile kuphumela ekuhwebeni kwemali ngababili. Isibonelo, i-Euro ingathengiswa ngokumelene neDollar, futhi ngaleyo ndlela ungathenga i-pair yezezimali ye-EUR / USD emelela ukuthi angakanani amadola wase-US eyodwa i-Euro. Kunamakhulu ezinhlobo zezimali emhlabeni wonke (eziningi zazo ziyathengiseka), kepha kunezimali ezimbalwa ezibalulekile nezimbhangqwana ezibalwa ngobuningi bevolumu ye-Forex:
I-Dollar (USD) 86.30%
Umthombo: Bank for International (BIS)
inhlolovo triennial (www.bis.org)
Izinhlobo Of Forex izimakethe
Izimakethe ezintathu amathuba Forex zimali ukuba ukuhweba lwemali yilezi: indawo emakethe, lwemali ikusasa lezimakethe, Futhi lwemali phambili emakethe.
The indawo emakethe okwamanje emakethe ngobukhulu yokushintshisana. Imakethe indawo forex yilapho zezimali ethengwayo kanye ithengiswe kweso ngentengo yabo zamanje exchange rate abavumelana. Lezi zingxoxo zenza zivamise lula noma ngumuntu broker noma ibhange, futhi iningi lethu abahwebi okudayisa ngeke kuphela ukudayisa emakethe endaweni.
Encwadini ejwayelekile endaweni okudayisa kuthengiselana, sizobona wamanje exchange rate ye EUR / USD, ocashunwe yethu broker ipulatifomu njenge-1.4213 intengo yokubuza, isibonelo. Sizothenga emakethe i-1000 yayo (i-1 inkatho encane) ngaso leso sikhathi ekuthengeni intengo ngokuchofoza kwenkinobho, ukhiphe izindleko ezincane zokusabalalisa noma zokuthunyelwa, bese uyithengisa emaminithi kamuva ukuze uthole inzuzo noma ukulahlekelwa, kubalwa ngamapayipi amadola. Singase sibe ne-$ 1000 kuphela ku-akhawunti yethu, kodwa ngenxa ye-forex ejwayelekile broker usinika 100: 1 asizakale, thina kuphela kudingeka $ 10 wekhasi akhawunti yethu ukuhweba ukuthi $ 1000 usayizi iyunithi.
In the lwemali ikusasa lezimakethe, Izivumelwano ethengwayo kanye ithengiswe olususelwa zosayizi ojwayelekile (inkulu kakhulu kunangendlela indawo forex) kanye idethi yokukhokha ku impahla yomphakathi izimakethe. Abatshalizimali uyavumelana ukuthenga noma ukuthengisa a inani elimisiwe lwemali othize ngesikhathi fixed exchange rate ngosuku oluyonqunywa esikhathini esizayo.
The lwemali athumele izimakethe zifana lwemali izimakethe ikusasa nge umehluko phakathi kwabo ukuthi yesivumelwano phakathi kwala maqembu womabili kunqunywa kuphela abantu abahilileke futhi akudingeki ukuba olusekelwe impahla imakethe umphakathi.
Ingabe Spot Forex adayiswa kuphi?
Forex akanayo indawo wenyama, okungukuthi, akukho isakhiwo enkulu efana New York Stock Exchange ku Wall Street noma Chicago Board of Trade Chicago lapho sabantu phansi noma 'umgodi ongenamkhawulo' ukuthethisa noma ngesandla isignali noma udlulisa dollar izikweletu ukuqhuba ukuthengiselana. Kunalokho, Forex usebenza ngemishini lwemali angaphandle emakethe okudayisa off-exchange ukusebenzisa ngokuphelele ngenethiwekhi okuqhubekayo amabhange kanye brokers.
Ngenxa emakethe lwemali kuyinto emakethe run endlalekile ngekhompyutha, kukhona okuholela izinzuzo. Forex Abadayisi kungaba ukudayisa kuphi, nganoma isiphi isikhathi nge-internet. Akukona kufanele baqala futhi baphethe ngosuku esekelwe amahora isakhiwo esithile noma ebhange elise izoni yesikhathi esithile. Kunalokho, kuba 24 ihora zokuhweba, izinsuku 5.5 ngesonto, ngoba kukhona njalo ezahlukene amabhange yokusebenza umnikelo amanani ezindaweni ezahlukene kanye nesikhathi esishintshashintshayo emhlabeni wonke. Ngenxa yesikhulumi yayo omkhulu zezimali kanye internet based (akukho Ukuhwebelana, akukho imigodi evulekile-ukukhala, akukho wabathengi phansi), okusheshayo-myalo futhi osheshayo ukugcwalisa isiqinisekiso kukhona into eyodwa njalo.
Ubani abathengisa Forex?
With kuka $ 4 isigidintathu ukuhweba nsuku zonke ivolumu, forex kuyinto emakethe enkulu kunazo zonke emhlabeni, izikhathi eziningi ezinkulu ukwedlula bonke isitokwe emhlabeni futhi izimakethe ikusasa kuhlanganiswe. Zolo lokhu kwaba domain okukhethekile mega ocebile, amabhange ukuthumela ezifakwa emhlabeni wonke, izinkampani hedging ukuchayeka kwabo lwemali ingozi emazweni ahlukahlukene noma ekuguqulweni inzuzo yabo, amabhange amakhulu phambili i imigomo kwezomnotho kazwelonke ngokusebenzisa umgomo wezimali izigidigidi dollar uthango izimali ezama ukuzuza emakethe. Lezi abadlali efanayo enkulu namanje zimumethe omningi ivolumu ukuhweba, kodwa muva nje ukwakheka nezisusa zishintshile.
I Ukususwa kwemibandela ekukhangiseni 1990s, kuhambisana ubuchwepheshe internet omusha osekelwe, kwaholela wabathengi ukwakha amachibi zezimali kithi abahwebi amancane ukuze ukufinyelela omkhulu ithuba zokucabangela e forex. Abahwebi letinkhulu naletincane ziye anda futhi umthamo ukuze ukusizakala iyehla iyenyuka elincane exchange rate ngenjongo kokuqagela inzuzo.
Forex kuyinto emakethe ethokozisayo ivelele kuzo zonke abanye ngenxa yezizathu eziningana:
Lolu ketshezi kunazo zonke izimakethe Investment (phezu $ 4 isigidintathu adayiswa nsuku zonke)
Amandla ukudayisa nomaphi, nganoma yisiphi isikhathi nge-inthanethi
Instant ukuhweba ukukhishwa nge slippage ubuncane
24 ihora zokuhweba, izinsuku 5.5 ngesonto. NgeSonto kusihlwa kuze kube uLwesihlanu ntambama.
Imakethe ayikwazi ekhoneni noma ilawulwe abahlanganyeli emikhulu
Ikhono ayisizi ekuphumeni eziphonsa izimakethe
asizakale Nezimo futhi eziningi zokuhweba nezimfuneko ongaphakeme wekhasi
Hedging inketho: ungakwazi banezikhundla eside futhi emfushane currency efanayo
wabathengi Iningi Charge ukusakaza kuphela, hhayi ikhomishana
Ngayinye yalezi zizathu lenza Forex ezikhangayo ezingaphezu kuka kwezinye izimakethe, futhi kuhlanganiswe ndawonye, ​​akukho umncintiswano: Forex sinikeza amathuba amaningi kunamanye izimakethe ngamanani aphansi kakhulu sokuqala amanani kanye nezindleko. Lezi izinzuzo zikhonjiswe ngaphezulu ngokucace esigabeni sethu okuthiwa FX Izinzuzo phezu Amasheya Nama-Futures.
Zonke lezi zinzuzo, akusho ukuthi Forex kuyinto cakewalk, kude kuwo. ngenkathi Forex ukuhweba imvelo ingase ibe nezinzuzo ezingaphezulu kunezinye, zonke izimakethe ziyingozi kubo bonke abathengisi, ikakhulukazi abahwebi abangenalwazi, futhi ngaphambili akunjalo. Eqinisweni, kunezindlela ezingaphezulu zokulahlekelwa ku-forex kunokuphumelela. Uma ungena kuwo ungakakulungeli, izibhamu zishaya ngemali yangempela, zilungele ukulahlekelwa imali yakho ngokulandelana. Amathuna ase-Forex agcwele izinsalela zabathengi abangenalwazi abadliwa yibo abanolwazi.
Sinikezela okuqukethwe kulesi sigaba semfundo ngenhloso ingalo wena ngolwazi, amathiphu, namacebo ukukusiza siphumelele ukuhweba forex. It is kuwe uzinike isikhathi ufunde konke ongakwazi ukukufunda futhi ucije yakho amakhono zokuhweba kanye uhlelo demo akhawunti kanye imali ebonakalayo. Kuphela ngemuva kokuthi licwebile ulwazi lwakho, amakhono, kanye uhlelo ne demo ukuhweba kufanele ziyaphuma ukudayisa akhawunti yangempela, futhi, ngisho nangaleso sikhathi, kungcono ukudayisa ezincane usayizi eziningi. Kukhona imivuzo Amazing kungatholakali kule emakethe - kodwa hhayi ngaphandle nezingozi isikhonzi, njengoba uya ufunda futhi abenza kangcono amathuba akho lokusinda inzuzo.
Izinhlobo Forex izimakethe
Kuyini Ngempela is adayiswa e Forex
Uyini Forex Ukuhweba
is Spot Forex adayiswa Kuphi